UKUVUSELELWA KWESICI KU-WINDOWS 10 INGUQULO 20H2 YEHLULEKILE UKUFAKA I-0XC1900101 (SOLVED) - I-WINDOWS 10
Ukuvuselelwa kwesici ku-windows 10 inguqulo 20H2 yehlulekile ukufaka i-0xc1900101 (Solved)
IMicrosoft isiqalile inqubo yokukhishwa ye- Windows 10 inguqulo 20H2 kuwo wonke umuntu onenqwaba yezici ezintsha nokuthuthuka. Futhi wonke amadivayisi ahambisanayo athola ifayela le- Windows 10 Isibuyekezo se-20H2 Mahhala. Lokho kusho ukuthi uma idivayisi yakho ihlangabezana nezidingo zesistimu ephansi Windows 10 Ukuvuselelwa kuka-Okthoba 2020 uthola Windows 10 isaziso sokuvuselelwa kwenguqulo 20H2. Noma ungathola Windows 10 I-20H2 ilandwe ngokuhlola ngokwenza izibuyekezo ezivela kuzilungiselelo -> ukuvuselela nokuphepha -> ukubuyekeza kwamawindows -> hlola izibuyekezo. Sekukonke Windows 10 Inqubo yokuthuthuka kulula Kepha kwabanye abasebenzisi, Windows 10 inguqulo 20H2 yehlulekile ukufaka Ngezizathu ezingaziwa.
Okuqukethwe umbukiso 1 Windows 10 Ukuvuselela i-20H2 yehluleka ukufaka 1.1 Isibuyekezo se-Windows Update Troubleshooter 1.2 Setha kabusha izingxenye zokuvuselela amawindi 1.3 Qiniseka ukuthi Amashayeli Wedivayisi Afakiwe Avuselelwe 1.4 Qalisa umyalo we-SFC ne-DISM
Abanye abanye bathola iphutha le-0xc1900101 ngenkathi bezama ukufaka Windows 10 20H2
Vuselela. Uma ungomunye wabo thola ukulandwa komyalezo wephutha Windows 10 buyekeza i-20H2 lapha ezinye izixazululo ezilusizo kuwe.
Windows 10 Ukuvuselela i-20H2 yehluleka ukufaka
Imbangela 01: Lapho ukulanda kwamawindows 10 Version 20H2 kuqediwe, iWindows icela ukuqala kabusha uhlelo ukufaka isibuyekezo. Ngemuva kokuqalisa kabusha kwesistimu, ukuvuselelwa kuka-Okthoba 2020 akufakiwe futhi kumlando wokuvuselela uthola iphutha elilandelayo: “Faka isibuyekezo ku-Windows 10, inguqulo 20H2: Yehlulekile ukufaka…” (iphutha: 0x80080008)
Imbangela 02: Ngemuva kokubheka izibuyekezo ezintsha, iWindows iqala ukulanda isibuyekezo sika-Okthoba 2020 se Windows 10 inguqulo 20H2, kepha ngesikhathi sokusebenza kokulanda ukubuyekezwa, kubhajwe ku-xx% (isb.
Isikhathi esiningi amawindows update ehluleka ukufaka ngenxa yokonakala Inqolobane Yokuvuselela iWindows , noma ukungezwani kwesistimu. Yebo, enye isoftware ephelelwe yisikhathi, ukungahambisani kohlelo lokusebenza olufakwe kukhompyutha yakho noma izingxabano zesoftware yomuntu wesithathu nakho kudala ukuthi iWindows update yehluleke ukufaka. Noma ngabe yisiphi isizathu lapha sebenzisa izixazululo lungisa Windows 10 Okthoba 2020 buyekeza izinkinga.
Izinkinga ze-iTunes ngamawindi 10
Into yokuqala okufanele uyenze hlola Windows 10 Isidingo esincane sohlelo .
Iprosesa: 1GHz noma i-CPU esheshayo noma uhlelo ku-Chip (SoC)
Imemori: 1GB ye-32-bit noma 2GB ye-64-bit
Isikhala sedrayivu enzima: I-32GB ye-64-bit noma i-32-bit
Imidwebo: I-DirectX 9 noma kamuva nomshayeli we-WDDM 1.0
Khombisa: 800 × 600
Ngakho-ke hlola futhi uqiniseke ukuthi unesikhala esanele sediski sokulanda nokufaka izibuyekezo zika-Okthoba 2020 (ubuncane be-32 GB Free Disk Space)
Okulandelayo, qiniseka ukuthi unoxhumo oluhle futhi oluzinzile lwe-inthanethi ukulanda amafayili akamuva wokuvuselela amafayili kusuka kuseva ye-Microsoft.
Vula Amasethingi -> Isikhathi Nolimi -> Khetha Isifunda Nolimi kusuka kokukhethwa kukho kwesobunxele. Lapha Qinisekisa ifayela lakho le- Izwe / Isifunda silungile kusuka ohlwini lokudonsela phansi.
Qala windows ungene endaweni ehlanzekile yebhuthi bese uhlola izibuyekezo, ezingalungisa inkinga uma ngabe kukhona uhlelo lokusebenza lomuntu wesithathu, insizakalo ebangela ukubuyekezwa kwamawindi kubambekile.
Susa onke amadivayisi wangaphandle axhunyiwe njengephrinta, isithwebuli, i-audio jack, njll.
Uma unedivayisi ye-USB yangaphandle noma imemori khadi ye-SD enamathiselwe lapho ufaka iWindows 10, inguqulo 20H2, ungathola umlayezo wephutha othi 'Le PC ayinakuthuthukiselwa ku-Windows 10.' Lokhu kudalwa ukwabiwa kabusha kwedrayivu okungafanele ngesikhathi sokufakwa.
Qalisa i-Windows esemthethweni yokubuyekeza i-Troubleshooter bese uvumela amawindi ukuthi athole futhi alungise izinkinga ukuvimbela isibuyekezo se-windows 10 20H2 ukufaka.
Cindezela isinqamuleli sekhibhodi yeWindows + I ukuvula Izilungiselelo zeWindows
Iya ku-Update & Security bese uxazulula inkinga.
Khetha isibuyekezo seWindows ne Qalisa i-Troubleshooter.
Isixazululi sokuxazulula inkinga samawindows sizoqala futhi sizame ukukhomba ukuthi ngabe zikhona yini izinkinga ezivimbela ikhompyutha yakho ekulandeni nasekufaka iWindows Updates. Ngemuva kokuqedela, inqubo Qala kabusha windows futhi futhi ngesandla Hlola izibuyekezo.
Setha kabusha izingxenye zokuvuselela amawindi
Uma isixazululi nkinga sokubuyekeza iWindows sehluleka ukuthola nokulungisa inkinga. Masisethe kabusha ngesandla izinto zokuvuselela iWindows. Lokho mhlawumbe kungaba yisixazululo esihle sokulungisa iningi lezinkinga zokuvuselela amawindi.
Vula i-Windows services console usebenzisa services.msc,
funa insizakalo yokuvuselela amawindi, chofoza kwesokudla bese ukhetha ukuma,
Futhi, misa i-BITS nensizakalo ye-superfetch.
Bese ucindezela isinqamuleli sekhibhodi yeWindows + E ukuvula umhloli wefayela,
Iya ku C:WindowsSoftwareDistributionDownload
Lapha susa konke okungaphakathi kwefolda, kepha ungasusi ifolda uqobo.
Ukuze wenze kanjalo, cindezela CTRL + A ukukhetha yonke into bese ucindezela Susa ukususa amafayela.
Manje zulazulela ku- C: Windows System32
Lapha qamba kabusha ifolda yekhathuni njenge-cartoot2.bak.
Lokho konke kuvulekile futhi ikhonsoli yezinsizakalo zeWindows,
Futhi Qala kabusha izinsiza (ukubuyekeza amawindi, ama-BIT, iSuperfetch) owake wakumisa phambilini.
Qala kabusha amawindi bese uphinde uhlole izibuyekezo
Ngiyethemba manje ukuthi uhlelo lwakho Thuthukisela ngempumelelo ku-windows 10 inguqulo 20H2 ngaphandle kwephutha lokufaka noma ukubuyekeza.
Qiniseka ukuthi Amashayeli Wedivayisi Afakiwe Avuselelwe
Futhi, Qiniseka Konke Kufakiwe Abashayeli Bedivayisi Babuyekezwa futhi iyahambisana newindows version. Ikakhulukazi Umshayeli Wokubonisa, I-Adapter Yenethiwekhi, ne-Audio Sound Driver. Umshayeli wesibonisi esiphelelwe yisikhathi ubanga kakhulu iphutha lokubuyekeza 0xc1900101, I-Network Adapter ibangela ukuxhumeka kwe-inthanethi okungazinzile okwehluleka ukulanda amafayela wokuvuselela kusuka kuseva ye-Microsoft. Futhi umshayeli we-Audio ophelelwe yisikhathi ubangela iphutha Lokuvuselela 0x8007001f. Yingakho sincoma ukuhlola futhi buyekeza amashayeli wedivayisi ngenguqulo yakamuva.
Futhi Qalisa ifayela le- isistimu yokuhlola ifayela ukwenza isiqiniseko sokuthi noma imaphi amafayela wesistimu okonakele, alahlekile angabangeli inkinga. Ukuze wenze lokhu vula umyalo we-oda njengomlawuli, thayipha sfc / scannow bese ushaya ukhiye wokungena. Lokhu kuzoskena uhlelo ngokulahleka kwamafayela wesistimu okonakele uma kutholakala noma iyiphi insiza ewabuyisela ngokuzenzakalela kusuka ku-% WinDir% System32 dllcache. Linda kuze kube ngu-100% uqedele inqubo Ngemuva kwalokho qala kabusha amawindi bese uhlola izibuyekezo.
Uma zonke izinketho ezingenhla zehlulekile ukufaka iwindows 10 ngo-Okthoba 2020, Kubangela iphutha elihlukile bese usebenzisa i- ithuluzi elisemthethweni lokudala imidiya ukuvuselela windows 10 inguqulo 20H2 ngaphandle kwephutha noma inkinga.
Ingabe izixazululo ezishiwo lapha zikusizile? Noma namanje, unezinkinga ngama-windows 10 October 2020 update update installation? Yabelana ngempendulo yakho kumazwana abekiwe. Futhi, Funda
Misa Windows 10 Vuselela kusuka ekufakweni kokuvuselelwa ngokuzenzakalela
Ungasilungisa kanjani isikrini seLaptop Touch esingasebenzi kumawindows 10
isikrini esimnyama namawindi wesikhombisi 10
windows 10 ukwehluleka ukufaka
asikwazanga ukuxhuma kusevisi yokuvuselela. sizozama futhi emuva kwesikhathi
ukungavumelani kunamathele ku-loop loop
amawindi ali-10 athuthukisa amaphesenti angama-99 anamathele
i-netflix ayidlali kwi-laptop